मखमली, सयपत्री फुले, झिलीमिली भए गाउँबस्ती – आयो तिहार
-सुनिता कंडेल । रात अधेरी तर यहाँ बत्तिहरुले उज्यालो छाएको छ । औंशीको मध्य रात तर, बत्तीहरुको उज्यालोले सबैका घर गाउँ बस्ती र सबैको मन उज्यालो छ तिहार पर्वले । तिहारको लागि चारैतिर ढकमक्क फूलेका...
जिन्दगीको दौडानमा धन-पैसा नै सर्वे सर्वा
-सज्जन ढकाल । भनिन्छ हाम्रो जिन्दगी निकै लामो छ । जिन्दगिमा सुख दु:ख भैरहने प्रवृत्ति हुन । जस्को समय र परिस्थिति कति बेला मजबुत हुन्छ, त्यो लिला भगवानलाई नै थाहा होला । हामी एकिन र...
दुई दशक अघिको मेरो दशै….
-टीका सुबेदी। दशैको बेला घर लिपपोत गर्नको लागी बिहानै ५ बजे वल्तिर पल्तिरका अान्टी, भाउजु, दिदी बहिनी साथीभाई संग एउटा सानो कुटो (कोदाली) अनि डोको नाम्लो र थैलो बोकेर नेटा हुदै नयाँगाउ पारी पट्टीको सालघारीको...
दशैंमा गुल्मी घुम्दै हुनुहुन्छ ? नछुटाउनुहोस् यी ठाउँ
-हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी । दसैँ मनाउने तरिका फरक–फरक छन् । कसैले खानपिनलाई खसैँ मान्छन् त कतिले घुमघामलाई दसैँ मानेका हुन्छन् । रोजगारिको शिलशिलामा होस् वा अन्य कारणले गाउँभन्दा बाहिर रहेकाहरुका लागि दसैँ घुम्ने अवसर हो...
खुसी, हर्ष र उमङ्ग बोकेर : आयो दशैं
-सुनिता कंडेल । हाम्रो एउटा महान पर्व र खुसिले भरिएको दिन मन फुकाउने प्रयास गरे । यो वातावरण यो मौसम पनि कति रमाइलो चारैतिर फुलिरहेका फूलहरु प्रदेशबाट फर्किएका आफन्तहरु, झुलेका धानहरु, फक्रिएका कोदाका बालाहरु छुट्टै...
-हीरा कुँवर । नागरिकका साझा मुद्धाहरुको वकालत गर्ने एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष फोरम हो नागरिक समाज । कुनै पनि दल, पक्ष वर्ग आदिको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा नागरिकका आवाजहरुलाई मुखरित गर्ने दम्भवाला निकाय हो नागरिक...
“हिजो म पनि बालक नै थिए”
-सुनिता कंडेल । आज एउटा हिस्सा ओगटेको क्षेत्रको बिषयमा बोल्न मन लाग्यो । जुन एउटा अबस्था जो कोहिले पार गर्नैपर्ने हुन्छ । यो समाजका सबै मानिस जुन अबस्था पार गरेर आयौं । एउटा अबस्था जुन...
सधै पर्दा पछाडी जिल्ला अस्पताल
-टोपलाल अर्याल । गरिवको जिल्ला अस्पताल तम्घास । दैनिक लगभग दुई सयले उपचार गराउँछन् । यो अस्पताल आधा अर्घाखाँचीका मानिसको पनि जीवन हो । अहिलेसम्म थुप्रै खाले राम्रा नराम्रा छाप आम नागरिकमा छन । नराम्रो...
स्मृतिमा : पुरानो घर र चुहिने खरको छानो
-सज्जन ढकाल । गरिबिको परिधी भित्र धरातलिय स्वरुप बनी वि.स. २०३३ सालमा गुल्मी जिल्लाको भुर्तुङ छापचौर गाउँमा निर्माण गरिएको सामान्य पानी ओत्ने दुई कोठाको घर, घरको दायाँ बायाँ र पछाडि पट्टि लिपपोतको कुरै छोडौ, किनकी...
तिज पर्वको महत्व र आधुनिकता
-सुनिता कंडेल। महिलाहरुको महान चाडको रुपमा मनाइने तीज आउन केहि दिन मात्रै बाँकी रहेको छ । चाड पर्वहरु मध्ये हरितालिका तीजलाई महिलाहरुको महान पर्वको रुपमा लिइन्छ । भाद्र शुक्ल तृतिया तिथिका दिन मनाइने तीज पर्वले...
-ध्रुब क्षेत्रि । आफु जन्मिएको ठाउ, पाखा पखेरा र आफ्नो देश छोडेर बिरानो देश जान कसलाई पो रहर होलार । तर ति पाखा पखेरी हुर्केको बढेको ठाउ र मातृभुमि छाडेर विदेशिनु पर्ने यी तिन कारणहरु...
संस्मरणः त्यो मित्रता जो प्रेममा परिणत भएन
हिम शिखर , गुल्मी भदौ ३ । हुनत मित्रता र प्रेम एकअर्का का परिपुरक नै हुन् । प्रेम नभइ मित्रता हुँदैन अथवा मित्रता मा अदृश्य प्रेम लुकेको हुन्छ । प्रेम र मित्रतालाई फरक फरक व्यक्तिले फरक...
पत्रकार र पत्रकारिता भित्र लुकेका पिडाहरु
-रजिस्मा के.सी. । ‘पत्रकारिता’ बाहिरबाट हेर्दा अति आकर्शक तर भित्रभित्रै चरम अभाव, अदृस्य नैरास्यपन र असुरक्षा । खारिएको दिमाग, तिखारिएको सरिर र कलम, एकोहोरो समाचारकै हुटहुटी, नखौरिएको दाह्री र फुस्स गन्हाउने झोला…! स्टुडियोको वातानुकुलित कुर्सीमा...
उनीलाई मेरो अन्तिम “प्रेमपत्र”
प्रिय मेरी मुटुको टुक्रा, लाखौं लाख सम्झना र असिम प्यार ! भनिन्छ जिन्दगी संघर्ष हो । जहाँ विभिन्न उकाली ओराली संगै आरोह अवरोह पार गर्नु पर्दछ । जिन्दगीलाई सुदृढ तरिकाबाट अगाडि लैजानका लागि जिन्दगीको सहयात्रामा अहोरात्र साथ...
नयाँ पोष्टहरु »